अब जनताले नि पाउने | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो अब जनताले नि पाउने
on: २ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०६:५१ तीतो मीठो 3,135 views
अब जनताले नि पाउने
कम्युनिष्ट सरकारमाथि यत्रो अविश्वास ? -
सबै युवा विदेश लखेटौं -
यसपालाको दशैं -
विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपति पड्काइन्, केपी ओलीले प्रममा दुई तिहाइभन्दा बढी विश्वासको मत पाए । स्थानीय तह र प्रदेशले पनि आआफ्ना सरकार पाए । प्रतिनिधिसभाले सभामुख र राष्ट्रियसभाले अध्यक्ष पाए । अब केही दिनमै देशले उपराष्ट्रपति, उपसभामुख र उपाध्यक्ष पाउनेछ । यी पदहरू क–कसले पाउने भन्ने पनि टुङ्गो लागिसकेको छ । यता देउवाले चौथो पटक पनि संसदीय दलको नेताको पगरी पाए । पदमुक्त भए पनि गोपाल पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई शपथ ख्वाउन पाए । देशले एक प्रकारको स्थायित्व पायो । यो सबै त ठीक छ । जनताले चाहिँ के पाए वा पाउँछन् त ? सबैले गर्ने मुख्य प्रश्न यही हो । नआत्तिनोस्, जनताका लागि पनि वाम सरकारले धेरै कुरा ल्याउँदै छ ।
प्रम ओलीले नेपाललाई विश्वमै भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउने भनेका छन् । बादलले नेपाल प्रहरीलाई नमूना पुलिस बनाउने रे ! लाल्बाउले देशलाई धूँवाधूलोमुक्त बनाउने रे ! मन्त्री मात्रिकाले पनि उद्योगमा क्रान्ति ल्याउनेजस्तो कुरा गरिसकेकै छन् । त्यसो त एमालेकै विद्यासुन्दरले काठमाडौंलाई विश्वकै नमूना शहर बनाउने धेरै पटक भनिसकेकै छन् । यत्ति भनेसी सिद्धिएन ? प्रम ओलीले उद्घाटनहरूमा धेरै नजान भनेकाले मन्त्रीहरूले फारो गरेर बोल्दा कतिपय प्रतिबद्धताहरू घोषणा हुनै पाएनन् । नत्र जनताका लागि कति थुप्रै पाउने कुराहरू हुन्थे होलान् । तैपनि चुहिएरै सही जनताले पाउने कुराहरू प्रधान र अन्य मन्त्रीहरूको मुखारविन्दबाट बेलाबेलामा खुस्किरहेकै छन् । यो कम्ता खुशीको कुरा होइन ।
जनताले पाउने थुप्रै योजना नयाँ सरकारले ल्याउने सोच बनाए पनि कतिपय कारणले यो भइरहेको छैन । पहिलो कुरा त सरकारमा आएको १ महीनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारमा मधेशवादी दलहरू समयमै नआइदिएका कारण सरकारलाई पूर्णता दिनैमा समस्या पर्‍यो । त्यस्तै, प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारी अटेर गरी कार्यक्षेत्रमा नगइदिएका कारण पनि प्रदेशहरूमा काम शुरू हुन सकेको छैन । त्यस्तै, प्रदेश सांसदले काम र दाम अर्थात् बजेट दुवै नपाएका कारण पनि देश बनाउने कामै शुरू हुन सकेको छैन । त्यसमाथि झन् ९ हजार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिँदै छन् । किनकि ७ वर्षको तलब एकैचोटि पाइने भएपछि कसले गरिरहन्छ काम ? यी र यस्ता कारणहरूले पनि सरकार अलि ढिलोढालो देखिएको छ । तर मौका पाउनासाथ सरकार दगुर्न चैं तयार छ भनेर बुझ्नोस् है ।
पहिले सरकारमा हुँदा पनि एमालेले नौ ‘स’ र आठ ‘ज’को योजना ल्याएको थियो । त्यसपछि अब कुनै नयाँ नारा जस्तै, दश ‘झ’ (झगडाको झ) ल्याउन सक्छन् । विकास र समृद्धिको नारा पनि बजारमा निकै खपत भइरहेकै छ । त्यसैको नयाँ प्याकेज आउन पनि सक्छ ।
अर्को समस्या नेपालको संस्कृतिजस्तो बनिसकेको संस्थागत भ्रष्टाचारलाई कसरी मिलाउने भन्ने पनि छ । यता नियमित बजेट चैं खुरुखुरु खर्च भइरा’को छ । तर, विकास बजेट भने रातो किताबमा मात्र गा’को छ । तर, खर्च गर्नेहरूलाई खर्च गर्नै गाह्रो भा’को छ । यसरी ८ महीनामा १८ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भा’को छ । अनि सरकारले पनि गरोस् के, खर्चै हुँदैन । अर्को कुरा, कर्मचारीतन्त्रलगायत प्राविधिक धेरै ठाउँमा राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे बढी नै पुगेका रहेछन् । त्यसैले पनि सरकारलाई काम गर्न समस्या भा’को छ । तर, प्रम ओलीले ‘एक्सक्यूज’ नखोज्ने ‘एक्शन’मै जाने भनिसकेका छन् । पहिले सरकारमा हुँदा पनि एमालेले नौ ‘स’ र आठ ‘ज’को योजना ल्याएको थियो । त्यसपछि अब कुनै नयाँ नारा जस्तै, दश ‘झ’ (झगडाको झ) ल्याउन सक्छन् । विकास र समृद्धिको नारा पनि बजारमा निकै खपत भइरहेकै छ । त्यसैको नयाँ प्याकेज आउन पनि सक्छ । एक्काइसौं शताब्दीको जनमुखी, जनवादी, समाजवादी, ‘मुलुक सुहाउँदो’ आदिमध्ये कुनचाहिँ नारा ल्याउने भन्नेमै अलमल भएकाले पनि समस्या परेको हो । जस्तोसुकै चुनौतीका चाङका बीच पनि लोकप्रिय नारा ल्याउन सक्ने खुबी वाम सरकारको हो । अब स्वास्थ्य, शिक्षा आदिमा क्यै न क्यै निःशुल्क प्याकेज ल्याउला सरकारले । तब न समाजवादउन्मुख संविधान, तब न वाम सरकार । त्यसैले वाम सरकारले जनताका खातिर छिट्टै नै केही न केही काम चैं गर्छ है, ढुक्क भएर बस्नोस् !
सरकारले आश र त्रासको हैन, आसैआसको सिद्धान्त लागू गर्न सक्छ । जस्तै, अहिले सरकारी अफिसमा हाजिर गरे तलब पाइन्छ । काम गरे त ओभरटाइम नै पाइहालिन्छ । केही पनि नगरे प्रोत्साहन भत्ता पाइन्छ । शायद सरकारले अब अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको योजना ल्याउन बेर छैन । आखिर कर्मचारी सङ्गठनभित्र पनि वामहरूकै वर्चस्व जो छ । दाल कहाँ पोख्यो थालमा । प्रमका अभिव्यक्तिहरू हेर्दा, सुन्दा पनि अब चैं देशमा केही न केही चैं हुन्छ जस्तो छ है ! प्रधानन्यायाधीश प्रकरणबाट त्यसको छनक पनि देखिइसकेको छ । प्रम भएदेखि यता ओलीले भनिरहेकै छन्, समयमै काम तमाम हुनुपर्छ । विवादास्पद थच्चिनुपर्छ । ठेकेदार सच्चिनुपर्छ । घुस खाइन्न, प्रदेशले पैसा पुगेन भनेर कचकच गर्न पाइन्न । नवधनाढ्य स्थापित हुन्छन्, बीसवर्षे गाडी विस्थापित हुन्छन्, बजार अनुगमन गरिन्छ, ढुकुटी भरिन्छ भनेर । दुई तिहाइ बाहुबली, शक्तिशाली प्रमले नै यत्ति भनिसकेपछि अब जनताले पाउने कुरा त कत्ति कत्ति । आशा गरौं अरू थुप्रै कुराका साथै घरघरमा एनसेलदेखि पूर्वपश्चिममा नाकचुच्चे रेलसम्म आउला । त्यसैले अब केको टेन्सन हौ ?
राम कुमार भियाल
लेख्ने काे हुन ? मन पर्याे ।
लेखक : मदन लम्साल सर
” पहिले सरकारमा हुँदा पनि एमालेले नौ ‘स’ र आठ ‘ज’को योजना ल्याएको थियो । त्यसपछि अब कुनै नयाँ नारा जस्तै, दश ‘झ’ (झगडाको झ) ल्याउन सक्छन् । विकास र समृद्धिको नारा पनि बजारमा निकै खपत भइरहेकै छ । त्यसैको नयाँ प्याकेज आउन पनि सक्छ । ”
— धेरै राम्रो लेख !!!
नपाउने ले ” केरा ” पायो बोक्रा सित खायो – जय होस्
पुर्बाहाग्रहको झुसिले डकार डकारेछन आजको भोलि पुर्बपश्चिम चुच्चे रेल कागजको हो र?
Kam Garne bal navaa pani bolne lekhane bal xa ni….
ओली सरकार ले केहि गर्छन कि भन्ने हाम्लाई लागेको छ !!! हेर्दै जाम सबै एक जुट भएर लगियो भने कसो नहोला त ! लेखक को व्यंग्य सैली र लेखाई राम्रो लग्यो !
ल है गाठे, अब चै केहि होला कि ??
LeaveaReply to राम कुमार भियाल Cancel Reply
विराटनगरमा बन्ने भ्यूटावर हवाईजहाज उडानका लागि खतरा
नेपाल बैङ्कको ८२ औं वार्षिकोत्सव : ८ शाखा विस्तार, स्मार्ट ब्राञ्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने
५० लाख बक्यौता तिर्दै सौर्य एयरलाइन्स, १० लाख बुझाए नियमित उडान : महाप्रबन्धक क्षेत्री
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको नाफा ९३ प्रतिशतले बढ्यो, जगेडा कोषमा ५ गुणा वृद्धि
भ्याट छुटको सुविधा हटाएको बिरोधमा अनिश्चितकालका लागि कपडा उद्योग बन्द
विद्युतीय कार उत्पादनका लागि फक्सवागनको ५० अर्व डलर लगानी
प्रदेश मातहतका कार्यालय कामबिहिन
विकासको गति बढाउन नेतृत्व तहमा समिक्षा शुरु : दाहाल
नागवेली लघुवित्तको सञ्चालन मुनाफामा ५४ प्रतिशत वृद्धि
नयाँ राष्ट्रपतिको पदभार समारोहमा सहभागि हुन मोदी माल्दिभ्समा